भर्खरै पत्ता लाग्यो हवन गर्दाका यस्ता फाइदा वैज्ञानिकहरु नै चकित ! – सजल सन्देश
भर्खरै पत्ता लाग्यो हवन गर्दाका यस्ता फाइदा वैज्ञानिकहरु नै चकित !
By Sajal sandesh	 On२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०१:३३
काठमाडौं – भर्खरै मात्र वैज्ञानिकहरुले गरेको अनुसन्धानमा हवन गर्नाले वातावरण स्वच्छ हुने कुरा पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकहरुले गरेको अनुसन्धानमा हामीले घरघरमा गरेको हवनबाट वरिपरिको वातावरण प्रदुषण रहित हुने कुरा पत्ता लगाएका हुन् ।
साथै हवनबाट निस्किएको धुवाँ स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएको तथ्य पनि पत्ता लागको छ । हवन गर्दा हामीले समिधा बाल्ने गछौँ, त्यहि समिधा जलेर निस्किएको धुवाँले सम्पुर्ण जीवहरुमा सञ्जिवनी शक्ति पाइने गरेको पनि अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।
हवनको माध्यामबाट बिरामीहरुलाई स्वस्थ बनाउन सजिलो हुने कुरा ऋग्वेदमा उल्लेख रहेको छ । हवन गर्दा शुद्दताको आवस्येक रहेको पनि अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।
हवनका लागि आँपको दाउरा, बेलको दाउरा,नीमको दाउरा,पलाँशको दाउरा,चन्दनको दाउरा,तिल, जौ र चामल, पीपलको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । हामीले गरिने हवनले वातावरणमा रहेका अदृष्य ९४ प्रतिशत जीवाणुहरु नष्ट हुने गरेको तथ्य पनि वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका हुन् ।
हवनका साथै हवन गर्दा पढिने वेदका मन्त्रहरुको कारणले शरिरमा सकारात्मक ध्वनीको प्रवाह हुने र त्यसबाट शरिरका लागि आवस्येक उर्जा आउने कुरा पनि वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएका हुन् ।
हवनमा बिशेष गरेर आँपको दाउरा प्रयोग गर्ने गर्न्छि । आँपको दाउरामा एक प्रकारको लाभदायी ग्याँस हुने गरेको र उक्त ग्याँसबाट वातथावरणमा रहेका व्याक्टेरीयाहरुको नष्ट हुने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको हो । एक अन्य अनुसन्धानका अनुसार आधा घण्टा हवन गर्न बस्यो भने हवन गर्दा आएको धुवाँकै कारणबाट टाइफाइड जस्ता रोग र अन्य जीवाणुहरु नष्ट भएर जाने गरेको वैज्ञानिकहरुले बताएका हुन् ।
१६६ वर्षअघिकाे दरबार हाइस्कुल नयाँ भव्य स्वरूपमा, तर कक्षा भने रित्तै !